संसद भवन भित्रै गोकुल बास्कोटालाई डिला संग्रौलाको झटारो ७० करोडको टेप कहाँ पुग्यो ? बास्कोटा यसरी परे जिल्ल ! – Enepali Samchar
संसद भवन भित्रै गोकुल बास्कोटालाई डिला संग्रौलाको झटारो ७० करोडको टेप कहाँ पुग्यो ? बास्कोटा यसरी परे जिल्ल !
April 5, 2021 adminLeaveaComment on संसद भवन भित्रै गोकुल बास्कोटालाई डिला संग्रौलाको झटारो ७० करोडको टेप कहाँ पुग्यो ? बास्कोटा यसरी परे जिल्ल !
e NEPAALISAMCHAAR// काठमाडौं, २३ चैत । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा।डिला संग्रौलाले सरकार र भ्रष्टाचार एकअर्कामा परिपुरक भएको दाबी गरेकी छिन्।
उनले आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिन्।
‘पूर्व सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभएको ७० करोडको टेप पनि कहाँ पुग्यो थाहा छैन, यस्ता धेरै भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले केही कारबाही गर्न सकेको छैन,’ डा।संग्रौलाले भनिन्।
र यो पनि : संघीयता हुनु हुदैनः गोकुल बाँस्कोटा
काठमाडौँ,२३ चैत । पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संघीयता बाध्यता भएको बताएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा उनले द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि संघीयता मानिदिएको बताएका छन् ।
‘संघीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम । यसमा चाहिँ के प्रतिगमन भएछ हँ प्रदेशहरू खारेज भएको त छैन । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मान्दिनुपरेको न हो, देशलाई खाँचो त थिएन संघीयता । लफडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तलबार घुमाउने भएछन् । कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने के
प्रधानमन्त्रीनिकट मानिने पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले लेखेका छन् । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्न परिपत्र जारी गरेपछि यसमाथि बहस गर्ने र प्रश्न उठाउनेलाई पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले जवाफ दिएका हुन् ।
गत ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा २८ असोजमा जारी जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने भएको छ ।
प्रचण्डको गर्जन नेपालमा मेरो हैसियत प्रधानमन्त्री भन्दा माथि छ
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबिलाइ राष्ट्रपतिद्धारा अस्विकार गर्ने संकेत !